Myitter - Page 90 of 90 - News and Media
ကိုဗစ်လူနာ ဘယ်လိုသေရလဲဆိုတာ မျက်ကန်းတစ္တေ မကြောက်သူတွေ သိအောင်ရေးပါတယ်…….
April 11, 2020 Myitter 0
ကိုဗစ်လူနာ ဘယ်လိုသေရလဲဆိုတာ,မျက်ကန်းတစ္တေ မကြောက်သူတွေ သိအောင်ရေးပါတယ်. လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံ, ကိုဗစ် အဖြစ်များဆုံးနဲ့ အသေဆုံး နယူးယောက်က ဆေးရုံမှာ ရှေ့တန်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် အတွေ့အကြုံကို ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဘာသာပြန်ပြီးရှယ်ပါတယ်….. လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က ငါ့ရဲ့ ကိုဗစ်လူနာတစ်ယောက် အမောဖောက် လာလို့ အောက်ဆီဂျင်ကို အမြင့်ဆုံးထိfacemask မျက်နှာဖုံးနဲ့ထိပေးထားတာသူ့ခမျာ […]
အမေရိကန်မှာ Covid-19 ကြောင့် တစ်ရက်တည်း လူ ၂၀၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီး စံချိန်သစ်တင်
အမေရီကန်၌ ယမန်နေ့ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူ ၂၁၀၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး စံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်။ Covid-19 ကူးစက်လူနာ ၅၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိလာခဲ့ရာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများ ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ ဥရောပနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ မပျံ့နှံ့မှီ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် […]
တွေ့ပြီလား …လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုအဘွားကအစ တစ်မိသားစုလုံး ၁၄ရက်စောင့်ကြည့်နဲ့ ဒုက္ခရောက်ကြရပြီ….
ရက်စက်လိုက်တာ case27ရေ… တွေ့ပြီလား ကိုယ့်မိသားစုကို ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့…. Cases 27 ဖြစ်စဉ်မှ ကလေး၊လူကြီး၊လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ အဘွား၁ဦးပါ ပါဝင်နေတယ်….. #ပြည်တော်ပြန်များသတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ….. ထိုင်းမှာရောဂါပိုးရှိနေလို့ဆေးရုံတက်နေရတာကို အလစ် မြန်မာပြည်ကိုခိုးပြန်လာတယ်တဲ့လား…. အခုကြည့်စမ်း….ကိုယ်မိဘတွေရော…..ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ ကိုယ့်မိသားစုဝင်ကလေးတွေ…. သက်ကြီးရွယ်အိုအဘွားကအစ တစ်မိသားစုလုံး ၁၄ရက်စောင့်ကြည့်နဲ့ ဒုက္ခရောက်ကြရပြီ…. ကျန်တဲ့ပြည်တော်ပြန်အားလုံး ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူကြပါဗျာ……။တက်လူ ကျိုက်မရောဆေးရုံမှ […]
မနေ့ကလဲ ဓါးနဲ့ထိုးတမှု_ဒီနေ့လဲတမှု_သတ်နေကြတာ ….
မနေ့ကလဲဓါးနဲ့ထိုးတမှု_ဒီနေ့လဲတမှု_သတ်နေကြတာ စည်ပင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး အရက်သောက်ရင်း အစနောက်လွန်ကာ စကားများရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား စည်ပင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး အတူအရက် ထိုင်သောက်ရင်း အစနောက်လွန်ကာ စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီ ၁၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင်က […]
ကျိုက်မရောမှ Positive လူနာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကတည်းက ရောဂါပိုးပါခဲ့သည်ဟု တင်ခဲ့သည့် Dr. ပြည့်ဖြိုးလှိုင်၏ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက် …..
ကျိုက်မရောမှ Positive လူနာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကတည်းက ရောဂါပိုးပါခဲ့သည်ဟု တင်ခဲ့သည့် Dr. ပြည့်ဖြိုးလှိုင်၏ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက် ဆရာတင်လိုက်တာ ပြည်သူတွေက နားလည်မှုလွဲပြီး ကျိုက်မရောတင်မကဘူး မော်လမြိုင် နဲ့ မုဒုံတမြို့နယ်လုံးရောခုထိဂယက်က မပြီးတော့ဘူးဆရာရေ …အားလုံး ထိတ်လန့်နေတုန်း …. Dr. ပြည့်ဖြိုးလှိုင် ၏ ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက် […]
မင်းရာဇာ အမှုမှ တရားလိုရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင် တာမွေမြို့မရဲစခန်းအတွင်း ဝင်ခွင့်မရ …..
ဘီပီအိုငျက စီဗဈ ဆေးဘူး ၇ သိနျးခနျ့ အမွနျဆုံး ထုတျလုပျဖွနျ့ခြိမညျ ….
ဗီတာမငျ-စီ စီဗဈဆေးပွားတှကေို သင်ျကွနျပိတျရကျတှမှောလညျး ထုတျလုပျနပွေီး ကုနျကွမျးဈေးတကျနပေမေယျ့ အတတျနိုငျဆုံး ဈေးလြှော့ရောငျးပေးမယျလို့ ဘီပီအိုငျဆေးဝါးစကျရုံ(အငျးစိနျ) က ထုတျပွနျထားပါတယျ။ အခုသင်ျကွနျကာလ ပိတျရကျတှမှော ကိုဗဈ-၁၉ ကို ကာကှယျဖို့အတှကျ Cevit Tablet (100’s) ဘူး ၅ သောငျးလောကျ ထုတျလုပျနပွေီး …. သင်ျကွနျပိတျရကျတှပွေီးရငျ ဘီပီအိုငျ […]
ရန်ကုန် ကုတင် ၅၀ဝ. အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် နပ်စ်မလေးတေ.ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ…..
ရန်ကုန် ကုတင် ၅၀ဝ. အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် နပ်စ်မလေးတေ.ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ… ကုတင် ၅၀ဝ. ရန်ကုန် ရဲ့ နပ်စ်မလေးတေအကြောင်းဖတ်ရင်းပုံလေးကြည့်မိတယ်… နှလုံးသားနဲ့ကြည့်ပါ ….ပါးပြင်ထက်က မျက်ရည်လေးက အသက်ပဲ… သူ့နေရာ ငါဆိုရင် လည်း ဝင်ခံစားကြည့်မိတယ် ….ဆံပင်မှာ ကိုဗစ် ၁၉ကပ်ညှိနိုင်တယ် …. အလှအပ […]
April 10, 2020 Myitter 0
ဇူလိုငျ ၃၀ရကျနတှေ့ငျ ရှတေိဂုံစတေီတျောကွီးအပါအဝငျ ဘုရားစတေီမြားအားလုံးဖှငျ့ပွီ…
ရှကေ့ယာဥျကို ညာဘကျကနလေညျး ကြျောတကျလို့ရပါတယျ ..
စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်ရာ အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက်တွေရှိလျှင်
မိဘပိုက်ဆံနဲ့ ဂိမ်းဆော့ Fb သုံးပြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မိဘကိုလုပ်ကြွေးနေတဲ့ ၁၀ နှစ်သားလေး